Ngwunye Exynos 992 ga-amalite na Ọgọstụ | Gam akporosis
Asọmpi ọhụrụ ga-apụta maka ya n'isi nso Snapdragon 865, Nke kachasị ike chipset nke Qualcomm taa. Nke a ga-abịa site n'aka Samsung na ga-abụ Exynos 992, ndorondoro ahụ nke ga-akarị SD865 ahụ e kwuru na mbụ ga-ama Snapdragon 865 Plus aka, ihe nhazi nke nwere ike ịdakwasị ahịa ahụ n'afọ a.
Ọnọdụ post-mmepụta nke Exynos 992 kwụsịrị na nso nso a, dịka akụkọ ọhụrụ sitere na South Korea wee nwee njikọ chiri anya na isi mmalite ndị nrụpụta n'ime, August bụ ọnwa nke chipset ga-amalite ụgbọ mmiri.
Exynos 992 ga-abụ onye nhazi nke 20 Galaxy Note
Ihe ọhụrụ Exynos 992 chipset ga-egosipụta Cortex-A78 cores, nke na-anọchite anya mmụba dị ịrịba ama na Cortex-A77, nke bụ ihe anyị hụrụ na Qualcomm Snapdragon 865. Na ajụjụ, ọ ga-enye arụmọrụ ka elu, dịka ndị bu ya ụzọ; Nke a ga - enwe mmetụta dị ukwuu na ahụmịhe onye ọrụ, na - enweghị mgbagha.
GPU nke Exynos 992 ga-eji mee ihe ga-abụ Mali G78, nke ga-aga nke ọma na Mali G77 dị ka nke kachasị ike. Companylọ ọrụ ahụ na-azọrọ na ọ bụ 25% rụọ ọrụ nke ọma ma a bịa n'ịgba ọsọ na-achọ egwuregwu na ọdịnaya ọdịnaya.
Exynos 992 arụmọrụ
Ọganihu ọzọ dị mkpa nke na-abịa na SoC a bụ node nm 5, nke na-anọchite anya arụmọrụ ka ukwuu n'ihe gbasara ike oriri na arụmọrụ ikpeazụ, gbasara usoro ndị ọzọ na-adịghị arụ ọrụ nke ọma taa. Okwesiri ighota na ugbua node kacha nta bu 7 nm, nke bu ihe anyi huru na Snapdragon 865 na Ọnụ ego nke 990.
La Usoro ihe ngosi 20 dị na Galaxy ga-abụ onye izizi iji kwadebe Exynos 992, dika ya Galaxy anọ 2, ọnụ ga-eme nke a. Companylọ ọrụ South Korea akwadobeghị nke a, mana ọ bụ ihe anyị nwere ike ijide n'aka.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Snapdragon 865 na-eme ka ọ maa jijiji: Samsung ịmalite ịmalite mmepụta nke Exynos 992 na Ọgọstụ
Akụkụ nke abụọ nke otu egwuregwu a kacha hụ n'anya abịarute: Soda Dungeon 2